Madaxweynihii hore ee Afgaanistaan ​​wuxuu degay UAE isagoo haysta lacag dhan 169 milyan oo doolar
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Dadka » Madaxweynihii hore ee Afgaanistaan ​​wuxuu degay UAE isagoo haysta lacag dhan 169 milyan oo doolar
Wararka Afgaanistaan • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Crime • Wararka Dowladda • News • Dadka • Ammaanka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Imaaraadka Carabta • Wararka kala duwan
Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee Imaaraadka Carabta ayaa xaqiijin karta in Imaaraadka Carabta ay dalka ku soo dhoweysay Madaxweyne Ashraf Ghani iyo qoyskiisa sababo bani’aadanimo.
Madaxweynihii Afganistan ee xilka laga qaaday ayaa ka soo dhex baxay Imaaraadka.
Ashraf Ghani ayaa lagu eedeeyay in uu ka dhacay qasnadda Afghanistan lacag dhan $ 169 milyan.
UAE “waxay ku soo dhaweysay” Ghani iyo qoyskiisa “sababo bini’aadanimo”.
Wasaaradda arrimaha dibedda ee Imaaraadka Carabta ayaa bayaan ay soo saartay maanta ku shaacisay in dalku uu ku qaabilay madaxweynihii hore ee Afghanistan Ashraf Ghani iyo qoyskiisa “arrimo bini’aadanimo” ka dib markii madaxweynihii xilka laga qaaday uu ka cararay Afghanistan Axaddii markii Taliban ay ku soo dhowaatay Kabul.
Ashraf Ghani iyo qoyskiisa ayaa hadda degay Abu Dhabi, caasimadda UAE.
“Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee Imaaraadka Carabta waxay xaqiijin kartaa in Imaaraadka Carabta ay dalka ku soo dhoweysay Madaxweyne Ashraf Ghani iyo qoyskiisa sababo bani’aadamnimo,” ayaa lagu yiri bayaan kooban, oo la soo dhigay mareegaha Wasaaradda Arrimaha Dibadda Imaaraadka oo si buuxda loo akhriyay.
Gaani wuu cararay Afghanistan dhowr saacadood ka hor dhaqdhaqaaqa xagjirka ah ee Taliban ayaa galay Kabul iyada oo aan la kulmin wax iska caabin ah.
Ma cadda waddada uu u aaday Imaaraadka iyo markii uu halkaas gaaray. Goor sii horreysay, Kabul News waxay sheegtay inuu ku hakaday Cumaan, halkaas oo uu ka yimid Tajikistan. Wargeyska Hasht-e Subh Daily ayaa sheegay in Ghani uu ka soo duulay dalka Uzbekistan oo uu ka soo duulay Cumaan.
Waxa uu ka tagay caasimadda Afqaanistaan ​​isaga iyo xaaskiisa Rula Ghani iyo laba qof oo kale, isaga oo la sheegay in uu kaxaystay lacag dhan $ 169,000,000. Sida laga soo xigtay Safaaradda Ruushka ee Kabul, Ghani wuxuu isku dayay inuu ku baxsado lacag aad u badan oo aan ku habboonayn helikobtarkiisa qaarna waxay ahayd in looga tago garoonka diyaaradaha.
Danjiraha Afganistan u fadhiya Tajikistan Muhammad Zohir Agbar ayaa sheegay in madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani uu dalka ka cararay, isagoo ka qaatay khasnadda dowladda 169 milyan oo doollar.
Diblumaasiga ayaa ku tilmaamay baxsadka madaxweynaha Afgaanistaan ​​“khiyaamo qaran iyo qaran” wuxuuna intaas ku daray in Ghani uu ka xaday khasnadda maaliyadda $ 169 milyan.
Sida uu sheegay safiirku, wuxuu racfaan u qaadan doonaa booliska caalamiga ah ee Interpol isagoo ka codsanaya in la xiro Ashraf Ghani oo la geeyo maxkamad caalami ah.
Qaar ka mid ah mas'uuliyiinta sare iyo siyaasiyiinta ayaa raacay Ghani ka bixitaanka dalka, oo ay ka mid yihiin, Marshal Abdul-Rashid Dostum, iyo Atta Muhammed Nur, oo horay ugu dhawaaqay dagaal ka dhan ah Daalibaan ee gobolka Balkh, ku-xigeenkii hore ee Golaha Amniga Qaranka Serur Ahmad Durrani, Wasiirkii hore ee Difaaca Bismillah Mohammadi iyo taliyaha maleeshiyada gobolka Herat Mohammad Ismail Khan.
Shirkadda Shiinaha ee E-Commerce Giant si ay u samayso Diyaarad Cusub
Jasiiradaha Canary ee Isbaanishku waxay u diyaargaroobayaan inay soo dhowaadaan ...
Ruushka ayaa u hanjabay Google iyo Apple…
Delta Air Lines waxay soo iibsatay 30 diyaaradood oo kale oo ah Airbus A321neo
Aalado, Drones, Gawaarida iswada ayaa qaabeyn doona Dalxiiska ...
Dhex mara dhaxalka Seychelles
Waddada Jamhuuriyadda: Barbados ayaa dooratay markii ugu horreysay abid...
COVID wuxuu dilay Ekundo! Aloha ku socota Libaaxa Afrika ee ...
Wakiilka Sare ee Kanada u fadhiya Jamaica ayaa booqday ...
Garsooraha reer Scotland ayaa tuuray loolankii lagu caweeyo ...
Japan ayaa ku dhawaaqday 19 xaaladood oo degdeg ah oo COVID-XNUMX ah ...
Jawaabta rasmiga ah ee COVID-19 Delta waxay dhaawaceysaa safarka hawada ...
Tirakoobkii ugu dambeeyay ee Gaadiidka Madaarka Fraport ee Sebtembar ...
Expedia waxay u aragtaa Koboc cajiib ah Jamaica
Faa'iidooyinka doorashada nidaamka qaansheegta otomaatiga ah
Badeecadaha Pelican -ka oo ay heli doonto Platinum Equity
Magaalooyinka ugu Wanagsan Adduunka Maanta
Ururka gaadiidka Yurub wuxuu dalbanayaa shaqada ugu yar ...
Terminalka ugu weyn ee Madaarka ee Tibet ayaa Hawlgallada Bilaabay
Kaliya 10% marka la eego 1 bilyan oo baabuur ayaa dhab ahaantii ammaan ah
Wasiirka Dalxiiska Jamaica ayaa magacaabay guddi hawleed si kor loogu qaado ...
Mideynta geesiyaasha DC iyo Villians -ka Ciyaarta Mobile -ka
Xilliga Cusub ee Amniga Dalxiiska Laatiin Ameerika
Xarumaha MGM Resorts waxay ku darayaan Cosmopolitan of Las Vegas ...
IMEX waxaa loogu magac daray Qeybta Abaalmarinta Warshadaha Qaranka ee Cusub ...
Bahamas Wasaaradda Dalxiiska & Duulista Hawada ...
Dhulgariir xooggan oo M6.1 ah ayaa ku dhacay Gobolka Xuduudda Peru iyo Ecuador
Kaarka COVID ee Dalxiisayaasha aan ka tirsanayn Midowga Yurub oo lagu soo bandhigay Faransiiska
Sidee bay Mareykanku ugu safri karaan Kanada iyadoo la raacayo xeerarka cusub?
Xarunta Bandhiga & Xarunta Shirarka Bahrain waxay leedahay ...
Saddex dhacdo oo Talyaani ah ayaa ku xoojisay dalxiiska oo wata cusub...
U safarka Imaaraadka, oo ay ku jiraan Dubai, India, iyo 14 ...
Xoghayihii hore ee arrimaha dibedda Mareykanka Colin Powell ayaa u dhintay ...
Diyaarad Helicopter ah iyo diyaarad ayaa isku dhacay hawada sare ee Arizona ...
The New Djibouti Sheraton oo la tartamaysa Kempinski iyo ...
Steven Malarski wuxuu leeyahay,
Ogosto 18, 2021 markay tahay 16:16
Waxba isma beddelaan. Muxuu qofku filan lahaa !!